दुर्गमका कर्मचारीका दुःख - Online Majdoor
फागुन महिना सुरु हुँदै गर्दा सबैलाई तातो मौसमको सुरुवात भएको अनुभूति हुने गर्छ । निम्न तथा गरिब परिवारका स्थानीयवासीको घरमा एकखालको खुसी नै आउने गर्दछ । चिसो मौसम सबैका लागि उस्तै खालको भए पनि हुनेखाने र आर्थिकरूपमा पछि परेकाहरूको जीवनशैलीमा भने फरक पर्दै आएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा बस्ने स्थानीयवासीलाई भने चिसो र गर्मी मौसम दुवै खास थाहा नहुने गरेको छ । छ महिनाभन्दा बढी समय हिमपातका कारण एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जानसमेत प्राकृतिक नाकाबन्दी हुने ठाउँमा चिसो र तातो मौसम कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभूति गर्न खासै नपाउने गरेको शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका डोल्पाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु न्यौपानेले बताउनुभयो ।
चिसो मौसममा ज्यान जोगाउन सदरमुकाम दुनैलगायतका ठाउँमा आफ्नो थातथलो छाडेर अधिकांश मानिस आउने गर्छन् । जब तातो मौसम सुरु हुन्छ (हिउँ पग्लिन्छ), अनि सर्वसाधारण आफ्नो थातथलोमा फर्किने गरेको अधिकृत न्यौपानेको भनाइ छ । केही स्थानीयवासी सोही हिमपात र प्राकृतिक नाकाबन्दीको बीचमै थातथलो नछाड्ने भएकोले सरकारी सेवा पुर्याउनका लागि भए पनि दुई दिन पैदल र दुई दिन हिँडेर कार्यक्षेत्रमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको न्यौपानेले पीडा सुनाउनुभयो ।
“जनताको काम हो, जान्न भन्न कहाँ पाइयो र ?”, उहाँले भन्नुभयो । उपल्लो डोल्पाका अधिकांश सरकारीले कार्यालयका कर्मचारी उपल्लो डोल्पामा विकास निर्माणको काम गर्न निकै मुस्किल भएको बताउँदै आएका छन् । जानु मात्र ठूलो कुरा नभएको बताउँदै उनीहरू खाना, आवासको व्यवस्थापन अर्को चुनौती भएको पीडा सुनाउँछन् ।
सदरमुकाम दुनैमा रु. एक हजार ९ सयमा पाइने एक बोरा (२५ केजी) चामल उपल्लो डोल्पाको शे–फोक्सन्डो गाउँपालिका प्रशासकीय केन्द्र सालदाङमा रु. पाँच हजार मूल्य पर्दछ । गाउँपालिकाको केन्द्रमा बत्ती नहुँदा काम गर्न मुस्किल हुँदै आएको कर्मचारी बताउँछन् । फोन, इन्टरनेट त धेरै ठूलो कुरा भएको अधिकृत न्यौपानेले बताउनुभयो । मौसम छिनछिनमै परिवर्तन हुँदा कतिखेर के हुन्छ थाहा नहुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । एक वडाबाट अर्को वडामा जानका लागि मात्र दुई दिन बढी लाग्ने भएकोले सेवा दिनसमेत मुस्किलमात्र होइन, कहाँ के भइरहेको छ भन्ने सूचनासमेत सजिलै दिन र लिन सक्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
सदरमुकाम दुनैबाट उपल्लो डोल्पा जाँदा घरका आफन्तसँग फोनमा ‘म प्रशासकीय केन्द्रतर्फ जाँदै छु’ भनेर खबर गर्दै गर्दा मनमनै अबको चार दिनसम्म के हुने हो भन्ने चिन्ताले मुटु ढुकढुक हुने गरेको पीडा न्यौपाने सुनाउनुहुन्छ । बाटोमा फोनले काम नगर्ने भएकाले बीचबाटोमै बिरामी भएमा उपचार नै नपाएर धेरैको अकालमै ज्यान गएको तीतो यथार्थ सम्झँदै उहाँले पीडा सुनाउनुभयो ।
बाटोमा बस्ने बासदेखि उपचार गर्ने स्वास्थ्य संस्था नहुँदा भगवान भरोसामा यात्रा गर्नुपर्ने पर्ने पीडा यहाँका कर्मचारीदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई हुँदै आएको छ । शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र पुगेपछि मात्र टेलिफोनको पहुँचमा पुग्ने अवस्था रहन्छ । न्यौपानेले भन्नुभयो, “त्यो पनि एकपटक १५ जनाभन्दा बढीले फोन गर्न नमिल्ने अवस्था छ । एक दिनमा खाना खाएको मात्र रु. ९ सय खर्च हुन्छ, नास्ता खाँदा त झन् धेरै हिसाब आउने गरेको छ ।”
कात्र्तिकदेखि हिमपात सुरु हुन्छ भने फागुनको अन्तिममा हिमपात बन्द हुन्छ । विकास निर्माणको काम गर्दा सिमेन्ट, बालुवा ढुङ्गासमेत चौँरीमा बोकाएर लिँदा भारी खर्च हुने गरेको छ । सामानको मूल्त्न्दा ढुवानी भाडा बढी खर्च हुँदा हैरान हुने गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारको काम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने काठ निकुञ्जको अनुमति भएपछि मात्र पाइन्छ ।
त्यस्तै कम पीडा छैन डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतम पंज्ञानीलाई पनि । सुविधासम्पन्न ठाउँमा बसेको आफूलाई दुर्गमको पनि अनुभव र सेवा लिनका लागि आफैँ रोजेर डोल्पा आएको बताउने पंज्ञानी विकासमा राज्यको स्रोतसाधन समानुपातिकरूपमा वितरण नहुँदा पिछडिएका जिल्ला विकासको मूल प्रवाहमा आउन समय लागेको बताउनुहुन्छ । फोन गर्नसमेत निश्चित ठाउँ तथा अग्ला डाँडामा जानुपर्ने त्यो पनि पालो पर्खनुपर्ने पीडाको बीचबाट उपल्लो डोल्पाका सर्वसाधारणले हैरानी खेपेको यथार्थ उहाँले बताउनुभयो ।
सर्वसाधारण बिरामी हुँदा हेलिकोप्टरमा उद्धारबाहेक अन्य उपाय नभएको गौतमको भनाइ छ । हुनेखाने मानिस हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी उपचार गर्छन् तर गरिबहरू भने मृत्यु कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका स्थानीयवासी शुद्ध पानी पिउनसमेत समय हेरेर पानी जम्मा गर्नुपर्ने पीडामा छन् । “ताक्सी, धोलगायतका ठाउँमा धमिलो पानी सफा हुन समय लाग्ने भएकोले समय हेरेर पानी जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ”, पंज्ञानीले स्थानीयवासीको खास समस्या बताउनुभयो ।
“विकास गर्न मुस्किल छ, राज्यको स्रोत परिचालन समानुपातिकमात्र होइन, भूगोलअनुसार हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दिने भत्तासमेत सदरमुकाम दुनै र उपल्लो डोल्पामा एउटै भएर कहाँ हुन्छ ? विकासका लागि बजेट पुग्दैन, जनता बजेट थप माग्न आउँछन्, स्थानीय तहमा स्रोत छैन, कसरी दिनु ?”, उहाँले भन्नुभयो । साना–साना गाउँ, छरिएर रहेका बस्तीका कारण विकास गर्न मुस्किल भएको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।